गलाती ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
५ ख्रीष्टले हामीलाई यस्तो स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र पार्नुभएकोले स्थिर रहो अनि दासत्वको जुवामुनि आफूलाई फेरि जोतिन नदेओ। २ हेर, म पावल तिमीहरूलाई भन्दैछु कि यदि तिमीहरू खतना गराउँछौ भने ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुनेछैन। ३ यसबाहेक, खतना गराउने सबै मानिसलाई म यो फेरि भन्छु कि ऊ मोशाको व्यवस्थाका सबै नियमहरू पालन गर्न बाध्य हुन्छ। ४ तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन कोसिस गर्छौ, चाहे तिमीहरू जोसुकै हौ, तिमीहरू ख्रीष्टबाट टाढा भएका छौ; तिमीहरू उहाँको असीम अनुग्रहको दायराबाहिर पुगेका छौ। ५ हामीचाहिं पवित्र शक्ति अनि विश्वासद्वारा परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिने आशा गर्दै उत्सुकतासाथ पर्खिरहेका छौं। ६ किनकि जहाँसम्म ख्रीष्टको कुरा छ, खतना गरे पनि, नगरे पनि त्यसको केही मोल हुँदैन तर प्रेमद्वारा उत्प्रेरित विश्वासको मोल हुन्छ। ७ तिमीहरू सत्यको मार्गमा राम्ररी हिंडिरहेका थियौ।* तर कसले तिमीहरूलाई सत्यको पालना गरिरहनदेखि रोक्यो? ८ यस्तो किसिमको शिक्षा तिमीहरूलाई बोलाउनुहुनेको तर्फबाट त पक्कै पाएका होइनौ। ९ अलिकता खमिरले पूरै ढिकोलाई खमिरा बनाइदिन्छ। १० तिमीहरू जो प्रभुका चेलाहरू हौ, म तिमीहरूबारे विश्वस्त छु कि तिमीहरूले फरक सोचाइ राख्नेछैनौ; तर तिमीहरूलाई दुःख दिने, चाहे जोसुकै किन नहोस्, त्यसले उहाँको न्याय भोग्नेछ। ११ भाइहरू हो, जहाँसम्म मेरो कुरा छ, यदि मैले खतनाकै विषयमा अझै प्रचार गर्दैछु भने मेरो किन अझै खेदो गरिंदैछ? यदि म खतनाकै विषयमा प्रचार गर्दैछु भने यातनाको खम्बाले* गर्दा कसैलाई ठेस लाग्ने नै थिएन। १२ बरु, जसले तिमीहरूको पतन गराउन खोजिरहेका छन्‌, तिनीहरूले नै आफ्नो अङ्ग काटून्‌। १३ भाइहरू हो, तिमीहरू स्वतन्त्र हुन बोलाइएका थियौ; यसैले तिमीहरूले यो स्वतन्त्रता शरीरका इच्छाहरू पूरा गर्न होइन तर प्रेमद्वारा एक-अर्काको सेवा गर्न प्रेरणाको रूपमा चलाओ। १४ मोशाको सम्पूर्ण व्यवस्था यही एउटा आज्ञामा पूरा हुन्छ: “तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।” १५ यदि तिमीहरू एक-अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने होसियार रहो, नत्र त तिमीहरू एक-अर्काद्वारा नष्ट हुनेछौ। १६ तर म भन्छु, तिमीहरू पवित्र शक्तिको भरमा हिंडिरहो, तब तिमीहरूले कुनै किसिमको शारीरिक इच्छा कदापि पूरा गर्नेछैनौ। १७ किनकि शरीरको इच्छा पवित्र शक्तिको विरुद्धमा हुन्छ अनि पवित्र शक्ति शरीरको विरुद्धमा; किनकि यिनीहरू एक-अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्‌, यसैकारण तिमीहरू जे गर्न चाहन्छौ, त्यो गर्दैनौ। १८ साथै, तिमीहरू पवित्र शक्तिको डोऱ्याइअनुसार चलिरहेका छौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। १९ अब शरीरका कामहरू प्रस्ट छन्‌। ती हुन्‌: अवैध यौनसम्बन्ध,* अशुद्धपन, छाडा आचरण,* २० मूर्तिपूजा, तन्त्रमन्त्र, दुस्मनी, कलह, डाह, रिस, झगडा, फूट, गुटबन्दी, २१ ईर्ष्या, अनियन्त्रित मद्यपान, भोजको मोजमस्ती र यस्तै अरू कुराहरू। मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै चेतावनी दिइसकेझैं यी कुराहरूको विषयमा म फेरि पनि चेतावनी दिंदैछु कि यस्ता कुराहरूमा लागिरहने मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन्‌। २२ अर्कोतर्फ, पवित्र शक्तिको फलचाहिं प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वास, २३ नम्रता, आत्मसंयम हो। यस्ता कुराहरूको विरूद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। २४ साथै, जो ख्रीष्ट येशूका हुन्‌, तिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई यसका वासना र कुइच्छासहित खम्बामा टाँगेका छन्‌। २५ यदि हामी पवित्र शक्तिको भरमा बाँचिरहेका छौं भने आओ, हामी पवित्र शक्तिकै भरमा ठीकसित हिंडिरहौं। २६ हामी फोस्रो घमन्ड नगरौं, प्रतिस्पर्धा गर्न एक-अर्कालाई नउक्साऔं अनि एक-अर्काको ईर्ष्या नगरौं।
^ गला ५:७ * शाब्दिक, “तिमीहरू राम्ररी दौडिरहेका थियौ।”
^ गला ५:११ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ गला ५:१९ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।
^ गला ५:१९ * ग्रीकमा “असेल्गिया।” यसले परमेश्वरको नियमको घोर उल्लङ्घनलाई बुझाउँछ, जसमा निर्लज्ज वा हठी मनोभाव मुछिएको हुन्छ।